Apple - Izaho dia Mac | Avy amin'ny Mac aho (Pejy 25)
Manofa trano birao i Apple mba hanafainganana ny fizotry ny famolavolana fampiharana any India
Ny drafitra fanitarana an'i Apple any India dia efa natomboka taorian'ny nanofana foibe 4.000 metatra toradroa
Apple Nanendry an'i Bob Mansfield hiambina ny "Project Titan"
Dingana iray hafa amin'ny fampivoarana ny tetik'asa be fatratra an'i Apple miaraka amin'ny fiara elektrika manokana. Manomboka izao dia i Bob Mansfield no ho mpanara-maso anao.
Manohy mahita ny fanitarana ny angon-drakitra fitateram-bahoaka amin'ny Apple Maps any amin'ny tanàna lehibe sasany izahay….
Hatsarao ny mari-pamantarana Wi-Fi amin'ny alàlan'ny fampiharana Mac OS X Wireless Diagnostics. Asehonay anao ny fomba fandikana ny angona tena ilaina
CarPlay misy amin'ny 2017 amin'ny maodely Ford vaovao
Ny marika Ford dia nanambara fa amin'ny taona 2017 dia ho tonga ny modely fiara vaovao rehetra izay ahitana ny SYN3 miaraka amin'ny CarPlay tafiditra ao Etazonia.
Apple dia manamafy ny fikasana hanokatra Apple Store any Taiwan
Ny firenena manaraka izay toa tian'i Apple hampifantoka ny tombotsoan'ny orinasany dia i Taiwan, izay hanokafany ny Apple Store voalohany tsy ho ela.
Ilay mpijirika izay niditra tamin'ny kaonty iCloud an'ny olo-malaza voaheloka higadra enim-bolana
Betsaka ny zavatra nosoratana momba ny halatra niaretan'ny olo-malaza Hollywood sasany tamin'ireo sary notehiriziny tao ...
Fomba samihafa hanodinana horonan-tsary mora amin'ny Mac
Mila mihodina video amin'ny Mac ve ianao? Manolotra rindranasa 2 izahay hanodinana horonantsary ao amin'ny OS X amin'ny fomba tsotra ary tsy hiseho mihodina izy ireo. Fantatrao ve izy ireo?
iPhone 7 sy ny "crappy-solution" an'ny jack adapter mankany amin'ny tselatra
Amin'ny alàlan'ny iPhone 7 manaraka dia afaka manafoana ny jack headphone i Apple ary mampiditra jack 3,5mm mankany adaptatera ao anaty boaty
Nomarihin'ny mpandinika Wall Street fa Apple dia mandray tetika mampidi-doza amin'ny iPhone 7 vaovao ho avy, maninona?
Herinandro iray hafa dia tonga ny fanangonana vaovao izay andrasanao. Raha tsy afaka namaky anay nandritra ny herinandro ianao na te ...
Ilay lazaina fa Apple Car dia hijaly mandritra ny dimy taona eo ho eo
Raha omaly isika dia miresaka momba ny CarPlay sy ny fahatongavany amin'ny fiara Koreana KIA, anio dia mitondra tsaho vaovao ianao ...
BitTorrent Live dia tonga amin'ny Mac amin'ny kinova beta
Tonga maimaimpoana amin'ny Mac ny tsimbadika beta an'ny serivisy mivantana BitTorrent Live. Ao amin'ny Soydemac dia lazainay aminao ny zavatra atolotray sy ny fomba hahazoanao azy izao.
Apple manokana iray izay miakatra lavanty amin'ny alatsinainy ao Charitybuzz
Ny marina dia tsy izy no voalohany amin'ny Apple I auctions eto amin'izao tontolo izao ary mino izahay ...
Apple dia notoriana noho ny fifanakalozana vokatra simba ho an'ny reconditioned amin'ny AppleCare
Apple dia mahazo fitoriana marobe any California hisolo ny vokatra rakotry ny fiantohana AppleCare + amin'ny fitaovana nohavaozina hafa.
Ny iPod Touch dia manakaiky ny fanjavonany tanteraka
Ny iPod no fitaovana nanangana an'i Apple ho malaza, noho ny revolisiona nateriny teo amin'ny sehatry ny mozika. Fa izao dia tapitra ny fiainany mahasoa.
Apple Store vaovao sy voalohany ao Brooklyn hisokatra amin'ny 30 Jolay
Hitanay ny fisokafan'ny magazay Apple vaovao any amin'ny firenena maro ary mahatonga anay hitsiriritra kely ...
Square Enix dia manolotra ny Cosmos Rings, ilay lalao milalao andraikitra manokana ho an'ny Apple Watch
Ny developer Square Enix dia nanambara ny "Cosmos Rings", lalao ho an'ny mpilalao ho an'i Apple Watcch. Inona no fantatsika momba ny Cosmos Rings?
Apple dia namoaka ny andiany fahasivy an'ny Safari Technical Preview izay nahitana ny fanatsarana ny fahombiazan'ny asa sy ny fifanarahana.
Apple dia namoaka ny beta ampahibemaso faharoa an'ny macOS Sierra ho an'ireo mpisedra, ao anatin'izany ny fiasa beta 3 ho an'ny mpamorona rehetra.
Averina indray, ataon'i Apple indray izany. Amin'ity indray mitoraka ity dia mividy serivisy streaming mozika ao anaty rahona izy, ho toy ny ampahany manatsara ny fanatsarana ny Apple Music.
Avela ho 200 Mb ve ny pendrive anao? Jereo ny fanamboarana azy.
Tutorial hamerenana ny fahafenoan'ny totalin'ny Pendrive izay ampiasainao amin'ny Mac sy Windows izay aorian'ny famolavolana dia milaza aminao izy fa 200 Mb fotsiny ny fahaizany
Apple Stores dia handoa mpampiasa izay misoratra anarana amin'ny fomba fandoavam-bola Apple Pay
Apple dia manohy ao anatin'ny telo ambiny folo miaraka amin'ny fihetsika mahomby izay manaparitaka ny fomba fandoavam-bola amin'ny Apple Pay. Ity…
Taorian'ny fanombohana ity serivisy fandoavam-bola ity amin'ny alàlan'ny iPhone na Apple Watch any amin'ny firenena manodidina antsika France, Apple ...
Apple tsirairay dia miloka bebe kokoa amin'ny atiny ao amin'ny Apple Music. Amin'ny alàlan'ny fifanarahana fiaraha-miasa dia mitondra ny rakikira vaovao an'ity rapper ity isika amin'ity indray mitoraka ity.
Apple nanampy banky amerikana maro kokoa izay manohana ny Apple Pay
Ireo tovolahy avy any Cupertino dia nanavao indray ny lisitry ny banky sy ny andrim-panjakana fampindram-bola mifanaraka amin'ny Apple Pay any amin'ny faritany amerikana.
Matahotra ny fahaverezan'ny mpamandrika "tsy ampoizina" i Netflix
Tapitra ny vanimpotoanan'ny fahasoavan'i Netflix any Etazonia. Ny salan'isa dia hiakatra hatramin'ny $ 9,99 isam-bolana ary matahotra ny orinasa fa hiala ny mpamandrika maro
Ny safidy naroson'i Alemana ho an'ny fiara mizaka tena
Ny tontolon'ny fiara mizaka tena dia manakaiky sy manakaiky ny zava-misy (ao anatin'izany ny Apple Car). Saingy mbola tsy voafaritra ny lalàna.
Katy Perry dia nanolotra manokana ireo fantsona fizarana niomerika an'i Apple "Rise", lohahevitra mampiavaka ny Lalao Olaimpika Rio.
Ny "MacBook" an'i Xiaomi dia akaiky kokoa
Ho an'izay liana indrindra amin'ny vokatra atolotry ny marika sinoa isan-taona ...
Tonga amin'ny fomba ofisialy any Frantsa ny rafitra fandoavam-bola Apple Pay
Io ilay firenena sisa navoakan'ny telo noresahin'izy ireo tamin'ny teny ifotoran'ny WWDC farany tamin'ny volana ...
Manolotra tahirin-kevitra momba ny fitateram-bahoaka ao amin'ny Apple Maps i Honolulu sy i Kansas City
Manohy ny fanitarana kely sy ny fanatsarana ny Apple Maps izahay ary amin'ity indray mitoraka ity ny fanatsarana ny ...
Maninona ianao no tsy tokony hividy iPhone 6s na 6s Plus izao
Manakaiky ny fandefasana ny iPhone 7 ary maro ny mpampiasa manontany tena raha tokony hanavao azy ireo izao amin'ny iPhone 6s. Andao hanazava kely an'ity fanontaniana ity
Ity dia iray amin'ireo toe-javatra izay raha ny ahy manokana dia tsy afaka milaza aho hoe tonga tamiko io, fa eny ...
Mametaka kaonty mpampiasa iCloud an'arivony i Spark
Ny fanavaozana ny mpanjifa mailaka Spark dia nahatonga ny kaonty iCloud an'arivony amin'ireo mpampiasa azy ho voahidy. Inona no antony?
Apple Music mikasa ny handresy ny Spotify amin'ny fanatsarana ny mpanjaka
Ny orinasa Apple dia nanolotra andiam-panatsarana andriana hanolotra tombony ho an'ny artista noho ny tolotra mozika an-tserasera hafa.
Soso-kevitra fiarovana: avelao / alao ny SIP
Zava-dehibe ny rafitra fiarovana SIP raha te hitazona ny halavirantsika amin'ny malware amin'ny mac isika. Andao hojerentsika ny fomba hitantanana ity baiko ity.
Alahady izao ary somary be asa kokoa noho ity teo aloha ity herinandro ity satria tsy nanana kinova beta ...
Ny fanadihadiana izay napetraky ny Vaomiera Eoropeanina tamin'ity taona ity hahafantarana ny fandoavana ny hetran'ny Apple any amin'ny kaontinanta taloha dia mitohy.
Ity herinandro ity dia ho tonga amin'ny faran'ny zoma ary tsy manana kinova beta na OS X misy izahay.
Apple hanokatra ivon'ny R&D vaovao any Grenoble, France
Apple dia mikasa ny hanokatra ivontoerana Fikarohana sy Fampandrosoana vaovao ao amin'ny tanànan'ny Grenoble frantsay ao anatin'ny volana ho avy.
Ny kafe izay tsy naloan'i Tim Cook tamin'ny Apple Pay
Satria manohy manitatra amin'ny fomba mahomby eran'izao tontolo izao ny Apple Pay ary manangana fivarotana any Eropa, dia nametra-pialana i Tim Cook noho ny finoana fa mbola lavitra ny lalana.
Apple TV miaraka amin'i Siri, ilaina ankehitriny
Apple TV amin'ny fampidirana azy miaraka amin'i Siri dia mihatsara indray. Amin'ity indray mitoraka ity, dia misy fantsona manokana ao amin'ny karoka nataony, mahatonga ny asany ho milamina kokoa.
Apple dia liana amin'ny fahalianana amin'ny fividianana F1
Toa liana amin'ny Apple ny handray ny zon'ny iray amin'ireo seho izay mampihetsi-po ireo mpankafy erak'izao tontolo izao. Marina ve izany?
Eddy Cue: "Apple dia tsy mpamokatra andian-dahatsoratra"
Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny filoha lefitra mpisolo toerana an'ny Apple an'ny lozisialy, nanome ny heviny momba ny tontolon'ny fahitalavitra izy ary mametraka ny orinasany amin'io tsena io.
Apple dia mahazo tombony telo heny amin'ny Nintendo amin'ny Pokemon Go
Ny tombony azo avy amin'ny fampiharana Pokemon Go ho an'ireo mpaninjara isan-karazany dia mamela an'i Nintendo amin'ny toerana farany manohitra an'i Apple.
Pokémon Go dia afaka niditra tao amin'ny angona Google. Sorohy izany!
Amin'ny fisoratana anarana amin'ny Pokémon Go, omenao alalana feno izy hiditra amin'ny angon-drakitra mifandraika amin'ny kaonty Google anao, hahitanao ny fomba hisorohana azy.
Planet of Apps, seho an'ny Apple ho an'ny mpamorona
Apple dia nanolotra antso an-kalamanjana handray ireo mpamorona fampiharana tontolo iainana Apple hanolotra ny fandaharana amin'ny fahitalavitra "Planet of Apps".
Tesla sy Google dia miatrika fitoriana noho ny lozam-pifamoivoizana miaraka amin'ny fiaran'izy ireo 'mizaka tena'
Mihetsika haingana dia haingana amin'ny haitao isika, saingy maharitra fotoana ny fitsarana. Taorian'ireo lozam-pifamoivoizana nisehoan'ny fiara dia mbola eo am-pitadiavana ny fahamarinana isika.
Ny vaovao farany mifandraika amin'ny macOS Sierra dia mampiseho amintsika fa manana safidy teratany i Apple hampihatra maody maizina amin'ny fampiharana antoko fahatelo
Ny Akademia eropeana voalohany ho an'ny Apple developer dia tonga tamin'ny volana oktobra ho avy izao any Italia miaraka amin'ny University of Naples Federico II
Nanome 1.000.000 $ i Apple hanampiana an'i Shina noho ny tondra-drano
Apple dia lasa orinasa amerikana voalohany nanome fanampiana ho an'ny China Foundation for Aid Against Poverty (CFPA), ...
Apple dia mitana ny laharana faha-5 amin'ny fandefasana solosaina amin'ny Q2 2016
Ny varotra solosaina manerantany dia ao anatin'ny ora vitsy amin'izao fotoana izao raha jerena fa ...
WWDC 2016 Video Transcripts Azo alaina izao
Mandritra ny fivoaran'ny Konferansa Developer, ny orinasa miorina amin'ny Cupertino dia hanoratra ny tsirairay avy amin'ny ...
Ity no Castor, injenieran'ny fidirana amin'ny alàlan'ny Apple
Jordyn Castor dia injeniera mamiratra manana fahasembanana eo amin'ny fahaterahana, jamba izy. Saingy tsy nanakana azy tsy hiasa amin'ny Apple mahery io.
Misy olana ve amin'ny fanavaozana ny beta beta ho an'ny daholobe 10? Ity ny vahaolana
Ny mpampiasa sasany dia mitatitra ny olana amin'ny fametrahana ny iOS 10 ho an'ny daholobe beta 1; ao amin'ny Applelizados androany dia entinay aminao ny vahaolana amin'ity lesoka ity
Mbola hitotongana ve ny varotra iPhone?
Ny varotra IPhone dia nianjera voalohany tamin'ny tantarany. Izahay dia mamakafaka ny antony mahatonga an'io toe-javatra io izay mety hiharatsy hatrany isan'andro
Ny Apple beta rehetra, ny tsindry mpivarotra, ny malware malware Eleanor, sy ny maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Tsy misy isalasalana fa ny herinandron'ny kinova beta ary tsy afaka milaza zavatra hafa izahay eto amin'ny tontolon'ny Apple….
MacPlaymate, fampiharana pôrnôgrafia very an'i Apple
Ny fitsipi-pitondrantena henjana an'ny Apple dia tsy toy izany foana ary telopolo taona lasa izay ny solosaina Macintosh SE dia nanafina fampiharana ny atiny vetaveta
Silicon Valley, tanjon'ny fizahan-tany geek
Ny foiben'ny Apple, Facebook, Google ary ireo orinasa teknolojia hafa dia namadika ny faritra Silicon Valley ho toerana fizahan-tany mahaliana izaitsizy
Apple Maps dia manampy tanàna 29 amin'ny fahitana 3D
Vao nanampy tanàna 29 tamin'ny fomba fijery 3D i Apple izay ahafahantsika mitsidika azy ireo amin'ny mason'ny vorona alohan'ny handehananay mitsidika ny vakansy.
Fitakiana vaovao ho an'i Apple, amin'ity indray mitoraka ity ho an'ny famolavolana ny tranokalany
Mazava fa androany ny orinasa tsara iray dia ny patanty satria maro ny hevitra tonga ao an-tsaina, foana ary ...
Ny fivarotana an'i Apple any Shina dia mitohy mihena na dia iray amin'ireo tsena matanjaka indrindra amin'ny resaka ...
Fantatsika fa avy amin'ny App Store dia afaka mahita rindranasa samihafa mamela antsika hamorona, hanova ary hizara ny lisitry ny lahasa ...
Ny famohana ny Mac anao dia tena tsotra ary tsy mila dingana fanomanana kely fotsiny. Nasehonay anao koa ny fepetra takiana mba hampiasa azy io.
Rehefa tonga ny fahavaratra sy ny fotoana malalaka ho an'ny mpampiasa maro dia tonga ny fanontaniana angano, hitsambikina ve aho ...
Miaraka amin'izany, efa dimy taona izao no nidina ny mpitantana ambony an'i Apple tamin'ny Sun Valley Conference, ...
Nambara nandritra ny fehezanteny farany WWDC natao tamin'ny volana Jona ary androany ireo mpampiasa izay ...
Izany no fiantraikan'ny Brexit amin'ny varotra Apple any UK
Inona no vokatry ny Brexit ho an'ny orinasa Apple sy ny mpanjifany? Ny sasany amin'ireo mpandinika tsara indrindra dia manazava amintsika ny toe-draharaha nisy tany Angletera taminay.
Milina Time Clean dika mitovy amin'ny mety doka
Androany mazava indrindra fa manana vaovao hafa momba ny malware hita maso amin'ny Mac isika, te-hanao fanamarihana ho an'ny rehetra ...
Ahoana ny fomba hanampiana Dropbox ao amin'ny Mac Finder
Ny marina dia ny Dropbox dia lasa mpiara-miasa amiko isan'andro amin'ny zavatra maro. Akaniko ity ...
Eleanor, ny malware mampidi-doza indrindra mandrahona ny rafitra Mac OS X
Bitdefender dia manondro an'i Eleanor, malware vaovao izay mametraka ny tenany amin'ny Mac OS X mba hanangonana vaovao amin'ny solosaina amin'ny fomba tsy zakan'ny olona inona no atao hoe Eleanor?
Walmart Pay dia nanitatra fanjakana 19 hafa
Ny serivisy fandoavam-bola Walmart Pay dia efa misy ao amin'ny 37 amin'ireo fanjakana 52 amerikana, ary hahatratra ny ambiny alohan'ny faran'ny taona.
Apple dia manamafy ny mpivarotra hitazonana ny taha-bolany
Apple dia manery ireo mpamatsy ny vokatra vokariny mba hitazomana hatrany ny tombom-barotra amin'izao fotoana izao.
Ilay horonan-tsary mozika Jupiter dia mizara Apple Music sy NASA hankalazana ny fahatongavan'i Juno
Apple Music sy NASA mankalaza ny fahatongavan'ilay fitsapana an-habakabaka Juno tany amin'ny planeta Jupiter taorian'ny fivezivezena 5 taona. Atolotray anao ny clip video sy ny mozikany.
Mitohy ny ady eo amin'i Apple sy Spotify
Apple nanakana ny app Spotify ho an'ny iOS miampanga ny orinasa amin'ny fifaninanana tsy ara-drariny ary mamaly ny fepetra apetrak'ireo mpamorona azy rehetra i Apple.
Mampiseho amin'ny GPU tafiditra, ny tadin'ny Apple Watch, micro-LEDs, sensor ID Touch amin'ny Mac sy maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Handeha amin'ny fanangonana vaovao voalohany amin'ny volana jolay isika, volana iray izay azo antoka fa io no nofidian'i ...
Ity ny fampiharana Maps vaovao ao amin'ny iOS 10
Nandritra ny WWDC farany teo, Apple dia nanambara ny rafitra fiasa vaovao manaraka, ary eo amin'izy ireo ny fampiharana Maps vaovao ...
Nike dia mampiditra an'i Tim Cook ao amin'ny filankevi-pitantanana
Amin'izao fotoana izao, ny tale jeneralin'ny Apple Tim Cook dia mirotsaka amina tetikasa fanampiny marobe ankoatr'ireo izay mifandray aminy ...
Ho tonga any Espana miaraka amin'ny macOS Sierra ve i Apple Pay?
Volana maromaro no lasa ary mbola tsy tonga any Espana i Apple Pay. Efa betsaka ny firenena manao ...
Apple Music sy NASA dia miara-miasa hankalaza ny fanombohan'ny misiona Juno
Apple Music miaraka amin'ny NASA dia nanangana faritra vaovao hanolorana ny vaovao rehetra mifandraika amin'ny fitsangatsanganana Jiona tany Jupiter
Apple liana amin'ny fividianana Tidal hanatsara ny onjam-peony
Ny orinasa Apple dia mifampiraharaha amin'ny fampidirana ny sehatry ny mozika Tidal on-stream amin'ny serivisy Apple Music.
Apple mankalaza ny taona voalohany amin'ny Beats 1 miaraka amin'ny horonan-tsary
Ny radio Apple Music Beats 1 dia herintaona, toy ny serivisy mozika Apple Music
Lahatsary Apple Campus 2 amin'ny volana Jolay
Tsy iray volana no lasa fa tsy manana sary vaovao momba ny Apple Campus 2 antenaina ao an-tanànan'i Cupertino ...
Miarahaba anao! Apple Music nivadika iray
Inona no natomboka ho serivisy Apple vaovao hifanaraka amin'ny fifaninanana amin'ny resaka streaming ...
Ny fanitarana Safari 10 vaovao ho an'ny iOS 10 sy macOS Sierra
Jereo hoe inona no vaovao sy ireo fanitarana hoentiny ao amin'ny macOS Safari 10, ilay fanavaozana ny motera fikarohana natolotr'i Apple tamin'ny WWDC 2016 lasa teo.
Samsung dia nifampiraharaha tamin'ny tontolon'ny OLED 40 tapitrisa an'ny Apple ho an'ny 2017 ary hitombo telo heny amin'ny 2019
Samsung dia hanome an'i Apple mandritra ny 3 taona ho avy an'ny Apple ny efijery OLED ho an'ireo maodely iPhone vaovao izay haseho amin'ny 2017.
Ahoana ny fomba fampandehanana ny fampandrenesana hafatra miverimberina ao amin'ny iOS
Voamarikao ve fa isaky ny mandray hafatra amin'ny iPhoneo ianao dia miantso indroa ny fanairana fampandrenesana? Ny…
Fahanterana efa nomanina tao Apple?
Raha tsy fantatrao, ny fahalainana efa nomanina na nomanina dia ny fandaharam-potoanan'ny fiainana mahasoa ny vokatra, ...
Hifehy ny Apple TV amin'ny 3D amin'ny alàlan'ny fihetsika ve isika ato ho ato?
Nomena ny patanty apetrak'i Apple amin'ny rafitra efijery virtoaly telo-refy fehezin'ny fihetsika. Ahoana no hampiharana azy?
Nanadihady tany Korea Atsimo i Apple noho ny fifanarahana tsy ara-drariny natao tamin'ny mpandraharaha
Apple dia eo am-panadihadiana any Korea Atsimo noho ny fomba fanao fanoherana ny fifaninanana amin'ireo andininy ao amin'ny fifanarahana nifanaovany tamin'ireo mpandraharaha ao amin'ny firenena.
Ahoana ny fomba hanajanonana ny Apple Music sy iTunes Connect
Ny fanovana nampidirina tao amin'ny iTunes tamin'ny fanavaozana farany dia nasongadina ary fanatsarana maro no nampiana ho an'ny rindrambaiko ...
Ahoana ny fanaovana sonia PDF avy amin'ny mailaka mailaka amin'ny iOS
Hatramin'ny tsy ela izay, ny fanaovana sonia karazan-tahiry voaray amin'ny alàlan'ny mailaka dia mitaky ny fampiasana ...
Minix NEO C Multiport Adapter ho an'ny Port USB-C MacBook 12-inch
Amin'izao fotoana izao dia azoko antoka fa efa anananao mihoatra ny mazava fa ireo lahatsoratra vakianao isan'andro dia nosoratana avy amin'ny ...
Apple Pay any amin'ny toerana fijanonana sy hotely sasany any Etazonia
Raha mbola manohy miandry ny fahatongavana ofisialy Apple Pay any Espana sy ireo firenena sisa ...
Orinasa Todoist: ny fiaraha-miasa ekipa dia nivoatra miandalana
Ny rindrambaiko Doist ho an'ny fandaminana ekipa sy ny fiaraha-miasa, ny Todoist Business, dia mandefa andiam-panatsarana vaovao kendrena amin'ny ...
Ny MacBook Pro vaovao dia mety hanana sensor amin'ny tanan-tànana amin'ny bokotra herinaratra
Ny tsaho farany mifandraika amin'ny ho avy MacBook Pro dia milaza fa mety hanana sensor fantsom-panaovana fantsona ao anaty bokotra herinaratra izy io
Apple hamoaka valiny amin'ny telovolana fahatelo amin'ny talata 26 Jolay ho avy izao
Apple dia nanambara fa hanolotra ny valiny telovolana fahatelo amin'ny mpampiasa vola ny talata 26 Jolay. Inona no antenaintsika amin'ny Q3 2016?
Avereno amin'ny alàlan'ny PKparis USB 3.0 K'1 ny MacBook anao
Raha mila fitahirizana fanampiny amin'ny MacBook Pro ianao ary tsy te hanokatra azy hampitombo ny kapila anatiny anatiny, raha ...
Manatevin-daharana ny matso Gay Pride i Apple ary manome fehin-kibo Pride ho an'ny Apple Watch
Ny mpiasan'ny Tim Cook sy Apple dia miditra amin'ny diabe LGBT Pride any San Francisco ary manome tarika Apple Watch fanontana voafetra.
Apple dia miasa amin'ny fampisehoana vaovao miaraka amin'ny GPU tafiditra
Apple dia mety miasa amin'ny Thunderbolt Displays vaovao miaraka amina GPU tafiditra hanatsara ny hery sy ny famahana. Inona no fantatsika momba azy ireo?
Ahoana no hahalalanao ny satan'ny Mac misy sysdiagnose anao
Indraindray ny Mac antsika dia afaka miasa somary miadana na misy hadisoana. Ny olona za-draharaha dia mila ny fampiasana sysdiagnose hamaha ny olana aminao.
Xiaomi Mi Band 2, mpiara-dia amin'ny iPhone tsara indrindra [horonantsary]
Ny marika malaza fiaviana sinoa dia nanavao ny fehin-tànana fantatry ny sarany lafo vidy. Miresaka momba ny Xiaomi Mi ...
Fiovana ao amin'ny Dropbox: mankany amin'ny sehatra serivisy
Dropbox, mpisava lalana amin'ny serivisy rahona, dia manavao ny orinasany manoloana ny fitantanana antontan-taratasy, mamela ny fampidinana sary etsy ankilany.
Ahoana ny fomba hijerena tononkira ao amin'ny Spotify
Vao haingana, nandritra ny WWDC 2016, Apple dia nanambara fampiasa vaovao ho an'ny Apple Music: azontsika atao ny mamaky ny tonon'ireo hira ...
Mandehana amin'ny keyboard OLED, Apple Pay amin'ny ATM, campus Apple fahavaratra ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Miverina amin'ny Alahady izao isika ary amin'ity tranga ity dia ny Alahady farany amin'ny volana Jona. Afaka isika izao…
BitTorrent Now dia ho avy tsy ho ela amin'ny Apple TV, iPhone ary iPad
Tsy ho ela, Bittorrent Now, ilay rindranasa izay hanolotra atiny audiovisual sy fampifanarahana amin'ny Virtual Reality, dia ho tonga amin'ny fitaovana Apple.
Bibikely Apple Music vaovao hita ao amin'ny iTunes 12.4
Ny kinova farany an'ny iTunes 12.4 dia manolotra bug kely rehefa mitendry hira latsaky ny 60 segondra avy amin'ny Apple Music
Ahoana ny fomba hitehirizana ireo miraikitra amin'ny mailaka amin'ny Drive iCloud
Rehefa mahazo mailaka amin'ny iPhone misy rakotra iray na maromaro ianao dia azonao atao ny misintona hoy ...
Jony Ive dia nahazo mari-pahaizana doctorat faharoa tamin'ny meso iray
Ny endrika Jony Ive dia nanjary nalaza taorian'ny naha-lohan'ny fisainana izay tao ambadiky ny iOS 7 sy ...
Mampiasa iOS amin'ny macOS miaraka amin'ny patanty Apple vaovao
Ny US Patent sy Trademark Office dia mametraka rakitra patanty Apple hampiasana iOS amin'ny alàlan'ny birao virtoaly amin'ny macOS. Atorinay anao ny interface.
Ny Apple Store fahadimy any Hong Kong dia hisokatra amin'ny 30 Jona
Ireo fivarotana Apple dia tsy mijanona hatrany amin'ny kontinanta Azia ary efa manana ny datin'ny fisokafan'ny ...
Ny fomba fampisehoana fampiharana misokatra ihany ao amin'ny OS X Dock
Indray mandeha indray avy any Mac aho dia hiresaka momba ny iray amin'ireo ampahany mahasarika ny saina indrindra isika ...
Ahoana ny fomba fakana sary malalaky amin'ny iPhone
Amin'ny alàlan'ny maody Panoramic Photo dia afaka maka sary tena mahavariana ianao amin'ny fakantsarin'ny iPhone. Ny maody sary ...
Tonga ny fahavaratra "Apple Camp" ho an'ny ankizy
Toy ny isan-taona dia eto ny "Apple Camp", atrikasa hahafahan'ny ankizy kely mianatra sy mankafy traikefa miavaka ao amin'ny App Store.
Ary ireo orinasa ara-bola dia mbola ampiana ao amin'ny Apple Pay any Etazonia
Hitanay ny fomba anohizan'ny Apple fanampiana ara-bola vaovao amin'ny serivisy fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny teknolojia NFC, Apple Pay….
Apple dia nanaparitaka efijery marani-tsaina mangarahara ho an'ny Augmented Reality
Ny Office Patent US dia nanaiky ny patanty napetrak'i Apple ho an'ny efijery marani-tsaina izay mampanakaiky ny orinasa amin'ny Augmented Reality.
Ianaro ny fomba hamaliana mora foana ny antso avy amin'ny iPhone anao rehefa azonao amin'ny Apple Watch ianao
Jereo ny fomba fampiasana ny Electronic DNI na DNIe amin'ny Mac miaraka amin'ny tutorial amin'ny teny Espaniôla izay hanazavana ny dingana tokony harahinao.
Mihoatra ny mpampiasa mavitrika 100 tapitrisa ny Spotify
Ny orinasan-tserasera mozika soedoà Spotify dia nanambara fotsiny fa manana mpampiasa mavitrika mihoatra ny 100 tapitrisa izy.
Mialà vola amin'ny Apple Pay ao amin'ny ATM an'ny Bank of America
Marina fa mbola lavitra ny Apple Pay amin'ny ankamaroan'ny mpampiasa izay monina any amin'ny firenena ivelan'ny ...
Apple dia mampihena ny asany amin'ny talenta tanora
Apple dia iray amin'ireo orinasa tsara indrindra mahita asa. Saingy, tato ho ato dia miseho eo ambanin'ireo mpifaninana aminy lehibe izy io.
Apple Watch 2 dia ho avy amin'ny fakan-tsary FaceTime sy bokotra vaovao
Ny patanty Apple vaovao dia mampiseho amintsika ny foto-kevitry ny Apple Watch 2 miaraka amina endrika nohavaozina miaraka amin'ny fakantsary anoloana ary ny bokotra vaovao izay hanatsara ny fiasan'izy io.
Ahoana ny fomba fitehirizana toerana iray avy amin'ny Maps ka hatramin'ny Notes
Tehirizo ny toerana iray avy amin'ny Apple Maps ao amin'ny app Notes an'ny iPhoneo amin'ny fomba tena haingana sy tsotra ary ...
Apple Maps dia manampy fampahalalana momba ny fifamoivoizana any Denver
Ny marina dia mahita fanatsarana marobe momba ny fampiharana Apple Maps izahay tato anatin'ny volana vitsivitsy ...
Apple dia nanangona $ 8 tapitrisa ho an'ny WWF miaraka amin'ireo fampiharana ho an'ny tany
Ireo apps ho an'ny tany natombok'i Apple ho fankalazana ny Andron'ny Tany dia nahangona $ 8 tapitrisa mahery ho an'ny fikambanana WWF.
Nanala ny fanohanany ny fivoriamben'i Donald Trump i Apple taorian'ny fanafihana imbetsaka natao tamin'ny orinasa
Apple dia nanapa-kevitra ny hisintona ny fandraisany anjara amin'ny Fifanarahana Nasionalin'ny antoko Repoblikana ho an'i Donald Trump noho ny toerana ara-tsosialy mifanipaka.
WWDC 2016, macOS Sierra, tvOS, watchOS 3, sns. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Ity dia iray amin'ireo herinandro matanjaka indrindra amin'ny resaka Apple vaovao ary misy ny voamarina ...
Ahoana ny fomba hanafoanana tanteraka ny lahatsoratra mialoha amin'ny iPhone
Noho ny fiasa an-tsoratra mialoha ny faminaniana natolotr'i Apple ao amin'ny iPhone sy iPad, antsoina hoe QuickType, fitaovana iOS antsika ...
iOS 10: Apple ve nametaka Xiaomi?
Saika isaky ny fanambarana vaovao nataon'i Apple dia matetika no misy adihevitra, ary amin'ity indray mitoraka ity dia momba ny iOS ...
Jony Ive, nahazo mari-pahaizana doctorat ho an'i Cambridge
Jony Ive, ilay mpamorona Apple no tompon'andraikitra amin'ny fahombiazan'ny orinasa, dia natolotry Cambridge tamin'ny haja ambony indrindra.
Iray amin'ireo mpitantana ambony an'ny Apple Music, Trent Reznor, dia nilaza fa ny fahombiazan'ny YouTube dia noho ny atiny nangalariny avy tamin'ny mpanakanto
Mahazoa Apple Watch maimaimpoana amin'ny fandraisana anjara amin'ity raffle ity izay ahafahanao mahazo ny kinova Sport an'ny Apple Watch.
Ny Apple Store voalohany any Macau dia hisokatra amin'ny 25 Jona
Ny marina dia ny Apple store dia manohy ny fanitarana kely nefa tsy azo sakanana manerantany. Latsaky ny ...
Ny alatsinainy tolakandro dia natombok'i Apple ny WWDC 2016 tamin'ny alàlan'ny fanolorana ny rafitra nomeny anarana ...
Fivarotana fandrosoana any Data Center any Irlanda
Apple dia mifantoka amin'ny fanatsarana ny lafiny rehetra amin'ny orinasany. Ny Ivotoerana Data any Irlandy no lakilen'ny fivoarana, saingy manana olana ara-birao izy ireo.
Paikady miafina an'i Apple ao anatin'ny 1000 taona ho avy
WWDC 2016 dia namela lisitra fanavaozana sy vaovao lava ho an'ny rindranasa Apple. Ity ny paikadin'ny fandraisana mpiasa.
Apple dia afaka nanolotra ny Apple Watch 2 eo akaikin'ny iPhone 7
Araka ny famoahana Digitimes, Apple dia afaka nanolotra ny Apple Watch vaovao miaraka amin'ny iPhone 7, na dia tsy hahatratra ny tsena aza izany mandra-pahatapitry ny taona.
Iray amin'ireo safidy azontsika ao amin'ny magazay Apple raha mpianatra isika, manan-janaka amin'ny oniversite, ...
Apple dia efa manana amin'ny fantsona ofisialiny YouTube ny hevi-dehibe notontosaina ny alatsinainy 13 jona lasa teo tao ...
Apple dia herinandro be atao ary tsy mahagaga izany. Tamin'ity herinandro ity ny ...
Hatramin'ny alatsinainy lasa teo dia efa misy ny beta voalohany an'ny iOS 10, na izany aza, amin'izao fotoana izao, ...
Afa-po tamin'ny lahatenin'ny WWDC an'i Apple?
Ity dia fanadihadiana kely izay tianay hatao ary heveriko fa mety hahaliana ny mizara ny ...
Anvitha Vijay: ny faralahy novolavolaina tamin'ny WWDC 2016
Anvitha Vijay no zandriny indrindra tamin'ity WWDC ity. Andao hofantarina ilay tovovavy izay nanomboka nivoatra tamin'ny iOS tsara kokoa.
Apple dia manala ny app Game Center avy amin'ny iOS 10 Beta 1
Ny beta voalohany an'ny iOS 10 Beta 1, dia nanafoana ny làlan'ny Game Center, ilay fampiharana taona vitsivitsy lasa izay no tena tsy nisy ilana azy tamin'ny iOS.
Ahoana ny fomba fitetezana ny iPad amin'ny alàlan'ny hitsin-dàlana fitendry
Raha toa ianao ka iray amin'ireo mampiasa keyboard miaraka amin'ny iPad na iPhone anao, ny hitsin-dàlana fitendry ...
Apple Pay hanitatra hatrany Frantsa, Hong Kong ary Suisse
Ireo firenena manaraka handray Apple Pay dia i Frantsa, Soisa ary Hong Kong. Toa firenena tsy dia liana firy amin'ny orinasa i Espana.
Apple dia nanolotra ny loka Apple Design 2016
Aorian'ny WWDC, vaovao marobe no miandry antsika. Araka izany, ny Apple Design Awards 2016 dia efa nozaraina, izay manome valisoa ny famolavolana ny fampiharana tsara indrindra amin'ity taona ity.
Ny tena marina dia ny keynote omaly tolakandro toa ahy ho iray amin'ireo tonon-teny mahaliana indrindra ary ...
Apple mandefa Xcode8 amin'ny rafitra fiasa vaovao ary manamora ny asan'ny mpamorona
Apple mandefa Xcode 8, ilay API nohavaozina mifanentana amin'ireo sehatra vaovao rehetra natolotry Apple tamin'ny WWDC 2016.
New Apple File System ho an'ny 2017
Nandritra ny WWDC 2016 dia natolotr'i Apple ny rafitra fisie vaovao ahafahany manomboka mampiasa azy io amin'ny macOS vaovao amin'ny 2017.
Sintomy ny rindrina macOS Sierra vaovao
Avy amin'i Mac avy aho dia asehonay anao ny rindrambaiko macOS Sierra vaovao hampidina sy hametraka amin'ny Mac, iPhone ary iPad anao.
Ny fampiharana Swift Playgrounds dia mahatonga ny fianarana manao kaody mora sy mahafinaritra
Rindrambaiko vaovao ho an'ny iPad dia mampianatra ny fototry ny fandaharana ary mamporisika ny fanandramana mamorona Swift Playgrounds ...
Ny fiasa Siri vaovao mahery vaika sy ny sonia tokana dia tonga ao amin'ny Apple TV
Apple androany dia nanambara ireo fiasa vaovao mahery vaika an'ny Siri, ny fampidirana sonia tokana amin'ny ...
watchOS 3: haingana kokoa, mora kokoa ary misy tombontsoa ara-pahasalamana revolisionera
Apple dia namoaka topi-maso ny watchOS 3, manolotra fanatsarana manan-danja amin'ny fahaizana misokatra ...
iOS 10, ny fanavaozana lehibe indrindra amin'ny tantaran'ny iOS
Ny iOS 10 dia misy vaovao lehibe ao amin'ny Messages, fampiharana vaovao ao an-trano, sary vaovao, mozika ary vaovao vaovao, ary ny ...
Auto Unlock tonga amin'ny Mac miaraka amin'ny macOS Sierra
Tsy vao sambany nahare momba an'io isika, fa raha vao sambany no ...
Apple mamerina ny rindranasa HomeKit ho an'ny automatisation an-trano: Home amin'ny iOS
Apple dia manamafy amin'ny WWDC 2016 fa ny rindranasa Home ho an'ny fifehezana ireo fitaovana elektronika ao an-trano sy any an-trano dia mandeha ho azy ao amin'ny iOS10.
Apple Pay amin'ny tranonkala dia tonga miaraka amin'ny macOS Sierra
Andro lehibe ho antsika izay nampiasa Mac nandritra ny taona maro androany ary androany tolakandro dia ...
Ny WWDC amin'ity 2016 ity dia manomboka amin'ny tsaho mahaliana maro ho an'ireo maqueros
Ny WWDC amin'ity taona 2016 ity dia manomboka! Miandry ny vaovao mety havoakany ny mpampiasa Mac rehetra ...
Apple Pay ho an'i Espana dia azo ambara amin'ny lahateny fototra androany
Ny marina dia ny orinasa Cupertino dia efa nanambara ny fahatongavan'i Apple Pay any Espana amin'ity taona ity ...
Iza no nilaza fa tsia amin'ny Thunderbolt Display anio?
Herinandro vitsivitsy lasa izay dia nibolisatra ny haino aman-jery fa misy ny mety hanoloran'ny Apple monitor vaovao, ...
Na ny WSJ aza dia manamafy ny fahatongavan'i Siri amin'ny Macs
Ny tena marina dia iray amin'ny vaovao miavaka sy miverimberina indrindra momba an'ity ...
Manohy mandray vaovao momba ny fananganana ilay Apple Campus 2 goavambe sy ireo fitaovana ary angovo azo havaozina izay hampiasaina amin'ireo fotodrafitrasa izahay.
Ora vitsy taorian'ny nanombohan'ny WWDC 2016, tonga ny sary mivantana voalohany an'ny Audit Griv Civic Bill Graham any San Francisco.
Eto isika dia eto ny andro nandrasana nandrasan'i Tim Cook, ary ny sasany amin'ireo mavesatra mavesatra ...
Amazon dia miomana hanangana serivisy famandrihana mozika vaovao, hoy ny tatitry ny Reuters
Taorian'ny fanafihana ny vondrom-piarahamonina LGTB tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo tao Orlando dia naneho ny fanohanany ny vondrom-piarahamonina amin'ny anaran'ny orinasa Apple i Tim Cook.
Ary raha manontany an'i Siri momba ny WWDC isika, hilaza amintsika ve izy?
Tsy isalasalana fa Siri dia tato ho ato dia manana andraikitra lehibe amin'ny teny ifotoran'ny orinasa Cupertino ary amin'ity ...
IMessage ho an'ny fitaovana OS Android?
Androany Alahady, rehefa misy ora vitsivitsy sisa alohan'ny hanombohana ny lahateny fototra natolotr'i Apple any San Francisco, ...
Apple dia manazava ny fomba fiasan'ny dokam-barotra ao amin'ny motera fikarohana ao amin'ny App Store
Ity fampiasa vaovao ity dia antsoina hoe 'Search Ads', ary pejy natokana ho an'ny antsipirihany ny fomba fiasa vaovao.
Misaotra ny iPhone, isan'andro dia maka sary sy pikantsary be dia be izahay, hany ka rehefa mandray iray ...
Amin'ity alatsinainy ity dia manana fotoana ihaonana amin'i Apple isika, hiaraka aminay ve ianao? Toy ny tamin'ny fotoan-dehibe, fampisehoana ary ny hafa ...
Ary manomboka ny tsara. Ny Auditory Bill Graham no toerana voafantina amin'ny WWDC amin'ny 13 Jona. Efa manomboka ny fanomanana an'io andro io.
WWDC amin'ity taona ity sy ny tsaho OS X hatreto
OS X, ahoana no hanovana ny anarana hoe macOS amin'ity alatsinainy 13 jona ity ary ho fanampin'ny anarana ...
Apple manatsara ny fampiharana Maps ary manampy ny antsipirian'ny fitateram-bahoaka
Apple dia manavao tsy tapaka ny fampiharana Maps ary ankehitriny dia anjaran'ny fitateram-bahoaka ilay Fanjakana ...
Ny Apple Store voalohany any Mexico dia efa manana ny toerany
Ny marina dia rehefa miresaka momba ny Apple store dia be ny mpampiasa manontany antsika hoe maninona no liana amin'ny ...
Hevitra MacBook Pro vaovao mahafinaritra miaraka amin'ny fisehoana OLED
Ny mpamorona Martin Hajek dia namoaka hevitra vitsivitsy momba ny fijerin'ny efijery OLED ao amin'ny MacBook Pro vaovao
Fetsy mahasoa 12 ho an'ny fahavaratry ny baolina kitra, eo alohan'ny fahitalavitra na amin'ny kianja
Androany manomboka ny Euro 2016 ary amin'ny "cerocoma", ny Lalao Olaimpika any Brezila. Ho avy ny fahavaratra baolina kitra izay hankahalan'ny maro, ...
«Apple Energy LLC», sampana vaovaon'ny marika, dia nihanazava
Apple Energy LLC dia mivoaka ho zanaky ny Apple Inc hikarakara ny famatsiana angovo madio an'ny orinasa. Mety ho tsena ho avy koa ve io?
Loharanom-baovao isan-karazany no manamafy fa afaka manafoana ny fampidinana mozika avy amin'ny iTunes i Apple
Tadidintsika indray ilay fehezan-teny milaza hoe "rehefa maneno ny ony, mitondra rano" rehefa miverina ...
Araka ny voalazan'i Wozniak, ny App Store no zava-dehibe indrindra noforonin'i Apple
Ny mpiara-manorina an'i Apple, miaraka amin'i Steve Jobs, Steve Wozniak dia manohy ampahany lehibe amin'ny orinasa na dia efa ...
Tim Cook dia iray amin'ireo CEO izay sarobidy indrindra amin'ny mpiasa ao aminy
Ny fanadihadiana farany natao momba ny hevitry ny mpiasa momba ny CEO amin'ny orinasan'izy ireo dia mampiseho an'i Tim Cook ho CEO 8 tsara indrindra.
Apple dia afaka mampiditra MacBook Air vaovao amin'ity volana ity
Indray mandeha indray dia manomboka miakatra ny honohono amin'ny andro mialoha ny Keynote. Amin'ity tranga ity dia mandeha ny tsaho ...
Avy amin'ny biraon'ny patanty amerikana no ahafantaranay ny efijery micro-LED miovaova sy malefaka avy any Apple izay azo ampiharina amin'ny lamba sy fitaovana.
Tsy vao sambany no niresaka ity olana ity fa tamin'ny faran'ny volana martsa sahady ...
Ny tranonkala manaraka ny WWDC an'i Apple dia miasa ankehitriny
Zara raha misy 4 andro aorian'ny hahitantsika ny tale jeneralin'ilay orinasa, Tim Cook, eo amin'ny sehatra indray ...
Ahoana ny fanovana ny adiresy tranonao ao amin'ny Apple Maps
Rehefa mampiasa ny application Apple Maps ianao hahazoana lalana mankany amin'ny toerana tadiavinao, dia azonao atao koa ny mametraka ny…
Nofoanan'ny Apple ny Apple Store veteran'i San Francisco
Taorian'ny fanavaozana ny Union Square Apple Store, Apple dia manomboka manala ny fivarotana taloha Stockton Street
Mampitandrina ny MacBook Pro 13-Inch Vaovao ny tatitra momba ny varotra mpivarotra
Ao anatin'ny herinandro manan-danja ho an'ny orinasa Cupertino sy ho an'ireo mpampiasa Apple isika. Mialoha ity herinandro ity ...
Apple Pay dia nanampy banky sy andrim-bola vaovao miisa 30 any Etazonia
Raha manohy manitatra iraisam-pirenena ny Apple, ny 13 jona ho avy izao, ho tonga any Suisse ny orinasa miorina amin'ny Cupertino ...
Apple Pay dia afaka tonga any Soisa amin'ny herinandro ambony
Toa mikasa ny ho tonga any Suisse i Apple miaraka amin'ny fomba fandoavany vola Apple Pay mandritra ny herinandro ...
Apple dia mety afaka manokatra ny Apple Store any India
Mety ho tanteraka ihany ny fikasan'i Apple hanokatra ny fivarotany Apple any India, amin'ny tatitra vaovao iray.
Ken Segall dia miresaka momba ny Apple ankehitriny
Ken Segall, mpiasa Apple malaza taloha, dia manome antsika ny heviny momba ny Apple androany tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny "The Guardian"
Apple dia namoaka doka vaovao momba ny mozika Apple
Tonga ny WWDC 2016 ary manohy ny milina marketing amin'ny fomba rehetra i Apple ary ...
Ahoana ny fomba fanomezana fanomezana iBook avy amin'ny Apple iBooks Store
Mahagaga ny famakiana, ary satria misy ny iPad, ary koa ny iPhone, dia afaka mitondra ny ...
Manome MacBook Pro 13 ″ miaraka amin'ny seho OLED tsaho
Ity herinandro ity dia tapa-kevitra raha ny amin'ny tsaho sy ny fivoahana mety tonga any WWDC 2016….
Ahoana ny fomba hamoronana kaonty iTunes any amin'ny firenena rehetra manerantany
Noho ny Internet, niha kely kokoa izao tontolo izao, raha lazaina amin'ny fomba ara-panoharana, mazava ho azy. Androany isika afaka mifandray ...
Apple dia miakatra amin'ny laharana faha-3 amin'ny laharana Fortune500
Amin'ny taona iray hafa, Fortune500 dia manome antsika ny laharan'ny orinasa 500 manana fidiram-bola ambony indrindra any Etazonia tamin'ny taon-dasa. Apple dia efa ao amin'ny Top3.
Araka ny tsaho izay efa tafaporitsaka tato anatin'ny volana vitsivitsy, dia ampahafantarinay anao ny vaovao azon'i Apple aseho amin'ny OS X 10.12
Ilay namorona ny iPod taloha sy ny lohan'ny Nest, vao avy navotsotra tamin'ny andraikiny tamin'ny naha CEO ny orinasa azy, novidian'ny Google
Ho fanomezam-boninahitra ny fiainan'ilay mpanao ady totohondry malaza Muhammad Ali, Apple dia nanavao ny pejin-tranony tamin'ny sariny sy ny teny nambarany tamin'ny lasa.
Apple dia efa manana masoivoho orinasa vaovao any India
Na dia mbola tsy voamarin'ny Apple na ny Actor aza ny tenany, dia toa efa ...
Chassis MacBook Pro, fikandrana Screen vaovao, fanavaozana iTunes ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Iray herinandro isika miala ny WWDC amin'ity taona 2016. Raha hanasongadinana ity fihaonamben'ny mpamorona ity aho ...
Apple ve mikasa ny hamerina hanoratra ny iPhone?
Ny fanavaozana ny marika iray izay tsy dia manintona intsony dia mety hitarika amin'ny fitomboana na efa ...
Torohevitra 10 hifehezana ny Apple Music (I)
Apple Music, izay nasongadina tao amin'ny WWDC tamin'ny taon-dasa ary navoaka tamin'ny faran'ny volana Jona, dia nampahery ny ...
Ary farany tsy hanana mpanara-maso 5k vaovao miaraka amn'ny GPU tafiditra ao amin'ity WWDC ity
Amin'ity herinandro ity dia iray amin'ireo mahery vaika ianao amin'ny resaka tsaho, fivoahana ary vaovao avy any Apple. Amin'ny lafiny iray ...
Miverina ao amin'ny Apple Store ireo fitaovana AirPort
Ny tobin'ny AirPort izay nanjavona tao amin'ny Apple Apple Store dia niverina taorian'ny fanarahana ny lalàna mifehy ny FCC
Azo atao ve ny mampiasa iPhone halatra?
Mampalahelo fa isika rehetra izay niaritra tamin'ny nofontsika tamin'ny fangalarana iPhone dia nametraka ny fanontaniany ihany tamintsika….
Ny antsipirian'ny 3 "Asus Zenbook 12,5 vaovao" sy ny "fitoviana mety aminy" amin'ny MacBook 12 "
Ny zavatra voalohany tiako holazaina dia ny ekipa tena mahafinaritra ary ny endrika mitovy na ...
Ny iPhone 7 dia hanana tahiry 32GB fa tsy 16GB
Ny tsaho momba ny iPhone 7 vaovao dia mihabetsaka rehefa manakaiky ny WWDC, hetsika fanao isan-taona ho an'ireo mpamorona karakarain'ny ...
Blomberg dia ho trano fonenan'i Mark Gurman
Eny, ny talata lasa teo dia tonga tamin'ny fampahalalam-baovao ny vaovao fa iray amin'ireo mpampahalala vaovao lehibe indrindra momba ny ...
Apple dia mahatsikaritra ny tsy fahombiazany amin'ny sasany amin'ireo serivisy an-tserasera
Apple dia mahatsikaritra lesoka amin'ny sasany amin'ireo serivisy an-tserasera toa ny iTunes, App Store ary Apple TV ary miantoka fa miasa izy io hanamboatra azy ireo haingana araka izay tratra.
Ny fampielezan-kevitra Apple vaovao, »Add Beats amin'ny fahavaratra» dia misy izao
Herintaona hafa i Apple dia mandefa ny fampielezan-kevitra any an-tsekoly any amin'ny firenena sasany ary tonga ny herintaona ...
Apple dia namoaka ny Swift 3.0 Preview 1 ho an'ny mpamorona
Apple dia namoaka ny kinova voalohany amin'ny fiteny fandaharana ao amin'ny kinova 3.0 ho an'ny mpamorona. Ny orinasa…
Apple hanangana mpanara-maso 5k vaovao miaraka amin'ny GPU tafiditra
Rehefa manakaiky ny datin'ny Kaonferansa Developer dia toa manomboka manomboka mandroso i Apple…
Ny fifanakalozana Apple Pay dia nahatratra $ 10.9 miliara tamin'ny 2015
Nandritra ny 2015, ny sandan'ny fifanakalozana natao tamin'ny alàlan'ny Apple Pay dia nitentina $ 10.9 miliara
Apple Pay dia manampy fanampiana amin'ny BMO, TD ary Scotiabank any Canada
Ny marina dia tsy afaka milaza isika fa tsy mihetsika i Apple mba hahatratrarana ny fanitarana faran'izay betsaka azo atao amin'ny ...
Apple voampanga ho nandika ny patanty Wi-Fi an'i CalTech
Ny rafitra patanty dia mpanentana amin'ny fitoriana, ary Apple dia tsy olon-tsy fantatra amin'ireo toe-javatra ireo. Ny fiampangana farany dia avy amin'ny California Institute of Technology na Caltech
Nozaraina ny fanasana ho an'ny WWDC 2016
Ny tena marina dia mandeha haingana ny andro ary latsaky ny roa herinandro isika amin'ity WWDC "heno" ity ...
1 Jona ary eto ny sidina fiaramanidina ao amin'ny Apple Campus 2
Afaka miteny sahady isika fa ity video ity dia lasa iray amin'ireo horonan-tsary izay tsy hita isam-bolana voalohany ...
Nandao ny tranonkala 9to5mac i Mark Gurman
Ity vaovao ity dia mazava ho azy fa zavatra tsy nantenain'ny olona tamin'ity fotoana ity tamin'ny sarimihetsika, fa ny marina dia ...
Ny doka ho an'ny Fetin'ny Reny an'i Apple dia nanala ireo mpivady lahy samy lahy
Ny orinasan'ny Cupertino dia nanala ny sarin'ireo mpivady mitovy fananahana izay naseho tamin'ny doka Fetin'ny Reny.
Ny vidin'ny stratospherika amin'ny fananana Apple Store ao amin'ny Union Square any San Francisco
Ny tohatra fitaratra ao amin'ny Apple Store vao natomboka tao amin'ny Union Square an'i San Francisco, dia mitentina 33,333 XNUMX dolara ho an'ny tohatra fitaratra
Ny chassis MacBook Pro mety misy habaka ho an'ny efijery OLED tafaporitsaka
Miseho amin'ny tambajotra indray ny tsaho sy ny fivoahana momba ny MacBook Pro vaovao. Marina fa manana ...
Nilaza ireo mpiasan'ny magazay Apple fa mahazo fandrahonana ho faty amin'ny mpanjifa matetika izy ireo
Tsy mahazatra ny resadresaka satria ny mpikambana ao amin'ny Apple dia manao sonia fifanarahana tsiambaratelo amin'ny andro voalohany amin'ny asany.
Ovay mora foana ny teny miafina amin'ny app OS X Notes
Raha iray amin'ireo mpampiasa manana tenimiafina amin'ny naoty rehetra ao amin'ny fampiharana Notes ianao dia azonao atao ny manova ...
Ahoana ny fomba hamafana ny tantaran'ny Apple Maps
Ny fampiharana Apple Maps dia mamorona tantara ny toerana rehetra tadiavinay. Natao h ...
Ny sandan'ny Apple dia niakatra indray taorian'ny nahatongavan'ireo mpampiasa vola vaovao
Tao anatin'izay herinandro lasa izay dia afaka nahita tamin'ny alàlan'ny tambajotram-pifandraisana vaovao marobe izahay nitatitra fa ny ...
3 andro miaraka amin'i Tim Cook: ity no CEO an'ny Apple
Ilay mpanao gazety Rajiv Makhni dia nitantara taminay ny zavatra niainany nandritra ny 3 andro niaraka tamin'i Tim Cook nandritra ny diany tany India. Tahaka ny ahoana ny CEO an'ny Apple?
Tim Cook dia tsy eo amin'ny lisitr'ireo tale jeneraly be karama indrindra
Tim Cook dia miharihary fa tsy eo amin'ny lisitra farany misy ireo CEO 200 be karama indrindra any Etazonia
Vaovao Airmail 3, tsaho MacBook Pro, Apple TV vaovao mety sy maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Alahady isika ary zara raha misy roa andro sisa handaniana ity volana Mey 2016 ity, izay mampatsiahy antsika ...
Diso fanantenana, ity ny drafitra fanavaozana iPhone natombok'i Apple any Espana
Apple dia nanangana ny drafitra fanavaozana ny iPhone any Frantsa, Italia ary Espana, kinova «decaffeined» an'ny programa fanavaozana ...
50.000 eo ho eo ny vola nangalarina tamina 90 taona mampiasa iTunes
Ny marina dia indrisy amin'izao fotoana izao ny olona dia tsy manana lolompo amin'ny olon-kafa sy ny vaovaon'ny ...
Ahoana ny fomba famonoana ny autoplay amin'ny YouTube
Na dia ampahany amin'ny fifaninanana aza, iza no tsy manana ny fampiharana YouTube apetraka amin'ny iPhone-ny? Serivisy…
Apple dia tokony hanaraka ny lalàna indianina
Manome toky ny governemanta Indiana fa tsy maintsy manaraka ny fitsipiny i Apple raha te hanokatra ny Apple Store izy amin'ny faran'ny taona 2017. Inona no hataon'i Apple?
GIFPaperAgent, fitaovana hanampiana sary mivantana na GIF misy ao aorian'ilay Mac
Ny sasany amin'ireo nanatrika dia azo antoka fa te hanova ny fiaviany amin'ny Mac tsy tapaka. Ho an'ireo izay…
Apple dia lany tahiry amin'ny Airport Xtrem sy Airport Time Capsule any Etazonia
Minitra vitsy lasa izay, nipoitra ny fanairana tamin'ireo mpampiasa sasany momba ny tsy fahampian'ny tahiry ao amin'ny fivarotana sasany ...